eNasha.com - अकबर जोधाः जहाँ वीरबल चाहिएन
१६ औँ शताब्दीका भारतीय शहन्शाहको हल्ली खल्ली काठमाडौँका सडकमा ! यो पनि सम्भव हुन्छ, यदि त्यो सिनेमा बनेर प्रदर्शन हुन्छ भने !
शुक्रबारबाट हाम्रो देशको राजधानीमा "अकबर जोधा" रिलिज भएपछि यसले स्वभाविक प्रतिक्रिया पायो किनभने यहाँ ऋतिक रोशन थिए, ऐश्वर्या राय बच्चन थिइन् । यी दुइले यसअघि "धूम दोस्रो"मा करेन्ट दौडिने ओठे चुम्मा खाएपछि यिनको जोडीलाई एक पटक हेर्नै पर्ने राजधानीका युवाहरुको मन थियो, जुन पूरा भएको छ ।
यद्यपि यी युवालाई भारतीय इतिहासमा कुनै रुचि छैन । किनभने, पृथ्वीनारायण शाहलाई त मान्दैनौँ भन्ने युवाहरु अब अकबरका कुरा कहाँ सुन्छन् र ! तर जब त्यहाँ ऋतिक र ऐश्वर्या बोल्न थाल्छन्, जब पर्दामा तिनको प्रेम मौलाउँदै जान्छ, जब त्यहाँ पनि सास भी कभी बहु थीको झलक आउँछ- तिनले इतिहास बिर्सछन्, सिमाना भुल्छन् र सिनेमासँगै एकीकृत हुन्छन् ।
आशुतोष गोवारिकरले लगान बनाए, त्यो पनि नेपालीले रुचाए । स्वदेश बनाए, त्यो पनि पचाए र अब अकबर जोधाका रुपमा आएका छन्, सम्भवतः यसलाई पनि स्वाद लिनेछन् । किनभने अकबर जोधा भारतीय इतिहास बताउँदैन, बरु उसले हिन्दू-मुश्लिम मिलेर बस्नुपर्छ भनेर सिकाउँछ । नारीहरु कुनै कामका हुँदैनन् भन्दैन बरु नारीका कुरा सुन्छ । राजा भइसकेपछि प्रजाका व्यथा बुझ्नर्ुपर्छ भन्छ । त्यसैले भिन्न सीमा र समयका राजा भए पनि नेपाली युवाले तिनका खास कुरा रमाइलो मान्छ ।
यो सिनेमाले सबैलाई छुन्छ किनभने यसमा हाल्नुपर्ने मसलाका लागि लेखक हैदर अली र निर्देशक आशुतोष गोवारीकरले कुनै कन्जुस्याइँ गरेका छैनन् । यसमा भव्यतम् द्वन्द्व छन्, जसले "ट्रोय"लाई बिर्साइदिन्छ, यसमा नाटकीयताको कमी छैन, जसले "कभी खुशी कभी गम"लाई भुलाइदिन्छ ।
लामो सिनेमा भए पनि तपाइँलाई दिक्क लाग्ने छैन । अर्थात्, समग्रमा चलचित्रले तपाइँलाई मनोरञ्जन दिलाउने छ । तर अन्त्यमा तपाइँलाई त्यो सौर्न्दर्यपछि चाहिँ एउटा खालीपन छोडेर जानेछ । जहाँ तपाइँले सोच्नु हुन्छ, सिनेमा लामो भइकन, सिनेमा राम्रो भइकन, सिनेमा उत्तम भइकन पनि सर्वोत्तम हुन सकेको छैन । किनभने हज्जारौँको भीड, भयङ्कर द्वन्द्व दृश्य, कुत्कत्याउने प्रेम-गाथा हेरिसकेपछि तपाइँलाई अन्तिममा त्यो खालीपन चाहिँ लाग्छ ।
सिनेमामा केही दृश्य छन्, जसले निकै छुन्छन् । अकबरको नाङ्गो शरीर देखेर लोभिएकी जोधा, प्रेमको टुशा पलाउँदै गर्दा अकबरको मुटु कँपाउने निर्णय जसमा उसले आफ्नो भाइलाई दरबारको माथिल्लो भागबाट नमरुञ्जेल माथिबाट फ्याँक्न लगाउँछ । जोधाको स्वीकृतिबेगर अकबरले जोधालाई नछुने कसम, सुफी गायनबाट मुग्ध भएपछि नाचेको अकबर, सासु र बुहारीको झगडा- यी सबैलाई निर्देशकले राम्रोसँग न्याय गरेका छन् ।
छायाँकन यसको गज्जब छ, भव्यतालाई अझ भव्यतम् तरिकाले पस्किन सिने टोलीले कुनै कञ्जुस्याइँ गरेको छैन । दरबारको भव्यतालाई जोधाको आँखाले देखाउनु र जोधालाई पहिलो पटक अकबरले प्रणय-प्रस्ताव राख्दा झलमल्ल हुने दृश्य पनि उत्तिकै प्रभावित पार्ने किसिमको छ ।
लास्टाँ त्यै भनेझैँ तपाइँले भन्नु हुँदो हो, यो त ज्यादै प्रभावित भएछ । ठीक भन्नुभो, किनभने हामीकहाँ यस्तो फिल्म बन्दैन र अरुका कुरा हेरेर प्रशंसा गर्नुबाहेक अन्य विकल्प छँदैछैन । त्यसैले त यो राम्रो फिल्म बनेको छ, जसलाई वीरबलको सहयोग चाहिएको छैन । बरु वीरबल भएको भए, खिचडी पो हुन्थ्यो कि !